कन्जुस केटालाई मात्रै ज्वाई बनाउने यि बाबुको घोषणा, चर्चित ब्यापारीकी सुन्दरी छोरीलाई विबाह गर्न यि गुण हुनुपर्ने « OsNepal News
कन्जुस केटालाई मात्रै ज्वाई बनाउने यि बाबुको घोषणा, चर्चित ब्यापारीकी सुन्दरी छोरीलाई विबाह गर्न यि गुण हुनुपर्ने
काठमाडौं । छोरीको विवाह समयमा नभएपछि थाइल्याण्डका एक बाबुले आफ्नी २६ वर्षकी छोरीको विवाह गराई दिनको लागी अनौठो जुक्ति लगाएका छन् । उनी थाइल्यान्डका एक धनाढ्य ब्यापारी हुन् । उनले आफ्नो छोरीसँग विवाह गर्ने केटालाई ३ लाख ५० हजार दिने घोषण गरेका छन् । ती ब्यक्तिले किन गरे त यस्तो घोषणा ?
बाबुले आफ्नो छोरीको लागी खोजेको केटा स्मार्ट हुनुपर्ने तथा पढिलेखेको हुनु पर्ने भनेर घोषण गरेका छन् । ५८ बर्षका ती ब्यापारीले आफ्नो छोरीको लागी खोजेको केटा कन्जुस र मेहनति तथा लगनशील हुनुपर्ने कुराहरु सर्तको रुपमा राखेका छन् ।
उनका छोरी अहिले सम्मनै कुमारी नै रहेको कारणले गर्दा छोरीको लागी खोजेको केटाले आफुलाई पनि ब्यापारमा सघाउनु पर्ने कुराको बारेमा समेत घोषण गरेका छन् । उनकी छोरीले उनलाई ब्यापारमा सघाउदै आएको कुरा बताएका छन् ।
जो खुट्टाले भिडियो बनाउँछन्
–पवित्रा घिमिरे रामपुर, १९ वैशाखः नेपाली साहित्यमा राम्रो छवि बनाउनुभएका साहित्यकार झमककुमारी घिमिरेको झल्को दिँदै
राईले आफैले काठको साईकल बनाएर चढेपछि बने भाइरल, उनको जुक्ति देखेर सबै परे छक्क
काठमाडौं । मणि हर्क राईले आफैले बनाएको काठको साईकल बनाई चलाएर हिडेको फोटो यतिबेला सामाजिक
कहिलेबाट सुरु भयो सेल्फी लिने चलन ? सेल्फीबारे जान्नुहोस् यी ११ रोचक कुरा
काठमाडौं । स्मार्ट फोनको प्रयोगसँगै पछिल्लो समय सेल्फी लिने बढेका छन् । अझ युवामाझ लोकप्रिय
आश्चर्यजनक यी हुन् चीनबारे १३ रोचक कुरा
काठमाडौं । विश्वलाई आश्चर्यचकित विकासको बाटोमा अघि बढेको देश हो चीन । नेपालको उत्तर छिमेकी